FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SAINT BERNEWFIE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Saint Bernewfie
Alika Saint-Bernard / Newfoundland na Landseer Newfoundland Alika mifangaro
'Poppy dia alika Newfoundland 50% madio any Saint Bernard. 2 taona izy amin'ity sary ity. Izy no zavatra akaiky indrindra ny bera teddy azon'ny biby velona. Manana toetra lehibe izy ary manana fo lehibe kokoa aza. Noho ny habeny lehibe dia matahotra ny alokalony izy. Toetra milamina tsy mampino. Ankafiziny ny ankizy ary avelany mandady eraky ny zanany ny zanak'anabaviko (18 volana), manopy ny sofiny sy ny vavany. Ambany dia ambany ny fepetra takiana amin'ny fanatanjahantena ary tokony havelantsika any an-trano mandritra ny fitsangatsanganana an-tampony izy. Tsara izy amin'ny fitsangantsanganana isan'andro sy fitsidihana isan-kerinandro ny zaridainan'alika. Matahotra ny mandeha fiara izy, zavatra iray izay iasantsika mafy. Izy no vady malalantsika ary tena ham! '
Tsy alika madio i Saint Bernewfie. Lakroa misy eo anelanelan'ny Saint Bernard ary ny Terre-Neuve na ny Landseer Newfoundland . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany rehetra ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Poppy ilay alika Newfoundland 50% purebred Saint Bernard 50% purebred amin'ny 2 taona
Jacoby ilay Saint Bernewfie mainty sy fotsy amin'ny 2 taona
vidin'ny fandidiana alim-bava alika
Jacoby ilay Saint-Bernewfie mainty sy fotsy eo amin'ny faha-21 taonany tamin'ny baolina tenisiny
Jacoby ilay mainty sy fotsySaint Bernewfie amin'ny taona 1, milanja 115 pounds
Jacoby the Saint Bernewfie amin'ny 16 volana, mirary Krismasy sambatra ho an'ny rehetra!
Jacoby the Saint Bernewfie tamin'ny taona 1, milanja 115 pounds miafina ao anaty antontan-taratasy ravina fararano
'Jacoby tamin'ny 16 herinandro - ny rainy dia Lord Justice Flanders, AKC St. Bernard milanja 180 lbs. Ny reniny dia Kiprocks Pursuit of Perfection, AKC Landseer Newfoundland izay milanja 140 lbs. Tamin'ny volana 7 dia mihoatra ny 100 lbs izy., Miaraka amin'ny lanjan'ny olon-dehibe efa lehibe 160-180 lbs. Mahatalanjona ny toetrany, satria bera teddy izy ary tsy mila zavatra hafa afa-tsy ny manenjika sy mamihina. Ny St. Bernewfie dia valan-javaboary mahatalanjona izay miaraka amin'ny biby hafa rehetra ary mankafy ny saina, mamaly ny fitiavana ary mora zahana. '
inona ilay terter patterdale
anglisy taloha frantsay bulldog Mix
sary alika an-tendrombohitra bernese tendrombohitra bernese